भेडाको उनजस्तो..... एउटा कथाको खोजीमा ......: शोकमा सगरमाथा !
धेरै पछि ब्लग अपडेट गर्नु एक मज्जा भइराको छ तर यहि संगै सगरमाथामा आएको हिउ पहिरोले १६ जना शेर्पा पथ प्रदर्शकको मृत्युको पीडाले नराम्रो संग संसार तरंगित भैरहेको छ। नेपालले सगरमाथा पाएर शेर्पा नबुझ्नु अनि बुद्ध पाएर शान्ति नबुझ्नु उस्तै उस्तै कुरा हो। सरकार कठ्मान्ड़ू मा बसेर तमाशा हेरेर ४० हजारदेखि बोल कबोल लगाइरहदा विश्व चाहि शेर्पाको पिडामा सरिक भैरहेको छ।
दिशानिर्देश कार्यक्रममा पेम्बाको जुन गुनासो छ त्यो कहिले सरकारले सुन्ला ?
[Photo Credit :LA Times.Com]